developer များအတွက် WatchOS2Beta3ကို Apple ဖြန့်ချိခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
developer များအတွက် watchOS2beta3ကို Apple ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဒီနေ့ Apple စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ watchOS2beta ကို3developer များရန်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစတင်ခဲ့သည် Apple Watch operating system ၏ဒုတိယ beta လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကနှင့်ယခု beta အသစ်သည်နံပါတ် 13S5293f ကိုတည်ဆောက်သည်။ watchOS2beta ကို3ပါဝင်သည် ဇာတိ application များအတွက်ထောက်ခံမှု နှင့် developer များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ applications များစမ်းသပ်ဆက်လက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ဒေသခံအာရုံခံကိရိယာမှတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်, အ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကို နှင့် စက်ပရိုဆက်ဆာ.
ပစ်လွှတ် watchOS2beta2ဟာတော်တော်လေးမသက်ဆိုင်ပါဘူးကောင်းပြီ Apple မတော်တဆ Apple Watch အသုံးပြုသူများအတွက်မွမ်းမံမှုတွန်းdeveloper များသာမကဘဲ။ ထို့ကြောင့် Cupertino ကုမ္ပဏီသည်ဤ update ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ထုတ်ဝေရန်အတွက် update ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။
watchOS2beta3တွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များသည်အသစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် nightstand mode, နာရီအသစ်သုံးမျက်နှာများ၏နည်းလမ်းသစ် 'Time Travel'နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များ။ ယခု beta နှင့်ပတ်သတ်သောတိုင်ကြားချက်အချို့တွင်aဆင်းရဲတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းအချို့ GPS ပြproblemsနာများနှင့်အချို့သောအမှားများသို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ချက်အတွက် bug တွေ.
ထို့အပြင်အက်ပဲလ်က၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် developer များသာအသုံးပြုခွင့်ရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် Apple Watch သည်ယခင် watchOS ဗားရှင်းသို့ပြန်မရနိုင်ပါ Apple ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၏အကူအညီမပါဘဲတနည်းလုပ်ပါ အဆင့်နှိမ့်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်း Apple Authorized Service Provider နှင့် Apple Stores တို့သည်ဤအဆင့်လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, အသုံးပြုသူများသည် သူတို့ရဲ့ device ကို Apple ကိုပို့ရမယ်, သူတို့သည်၎င်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြန်လာရန်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Apple ကမည်မျှစဉ်းစားသည်ကိုမူမသိရသေးပါ တာဝန်ခံ ဒီဖြစ်စဉ်အတွက် (သူတို့ကဒီအဘို့အတာဝန်ခံယူဆ) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » developer များအတွက် watchOS2beta3ကို Apple ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အိုင်ဖုန်းမှလက်ပတ်နာရီကိုပြန်မဖွင့်ပါနှင့်ယခုပြန်လည်ချိတ်ဆက်သောအခါ Apple ID key တောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆာဗာနှင့်ပြaနာရှိနေသည်။ S ကိုငါထပ်မံ ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။
အဲဒါကိုပြင်ဖို့သင်စီမံခဲ့သလား။ ပစ္စည်းကိုပိတ်ထားပြီးထပ်ချိတ်ပါ။ ပြtheနာကသင့်မှာ iPhone မှာ iOS9မရှိဘူးဆိုရင်သင်ချိတ်ဆက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်ပါသည်။
OS X El Capitan beta3ကို developer များလက်ထဲအပ်သည်